အချိန်​မရလဲ ( ၅ )မိနစ်​စာ​လောက်​ ခဏဝင်​၍ ဖတ်​ကြည့်​​ပေး​စေချင်​ပါတယ် - khitalinmedia
” အ​မေ” ဒီမှာ ဘာထိုင်​လုပ်​​နေတာလဲ လို့​ပေါ့ချိ့နဲ့နဲ့ အားအင်​​လေးနဲ့ ထကာ ” ကတုန်​ကယင်​ အသံ​လေး​တွေနဲ့..အ​မအိုပြောပုံကသားနဲ့ / သမီး လွှဲလိုက်​တဲ့ ပိုက်​ဆံလာထုပ်​တာပါဘဏ်​ရုံးမဖွင့်​​သေးလို့. ခနထိုင်​​စောင့်​​နေတာပါတဲ့။
လာပါ ” အ​မေ ဆိုပြီး မုန့်​ဟင်းခါး ဆိုင်​​ဘေးနားက ” ထမင်းဆိုင်​​လေးမှာအ​မေအို အတွက်​ ထမင်း​ပွဲ​လေး မှာပြီး စီစဉ်​​ပေးလိုက်​တယ်​ ၊၊ဗိုက်​ဆာ​နေလို့လား မသိပါဘူး ” အ​မအို စားလိုက်​တာ ဇွတ်​​ရောတင်း​ရောပဲ ကျွန်​​တော်​ဖြင့်​ သနားလိုက်​တာ ၊ မျက်​ရည်​​တောင်​ ဝဲမိတယ်။
ပါတယ်​ ပါပါတယ်​ သားရယ်​ ​ပြောကာ အိပ်​ထဲက. ဖုန်း​လေးကို မမ်ိတမိ ဆွဲကာကျွန်​​တော်​ကို လှမ်းကြည့်​​နေတယ်။
” ဒါပဲ သား ဒိဖုန်းနံပါတ်​ပဲဆိုပြီးပြောရင်းဆိုရင်း အ​မေအိုက ဖုန်းကိုဖွင့်​ကာနံပတ်​​တွေအား နှိပ်​​တော့တယ်။
အိမ်​လည်း ပြန်​လာမအားဘူး ” အလုပ်​ရူပ်​​နေတယ်​ ကျွန်​​တော်​ အဖွားအိုဘက်​ တစ်​ချက်​လှည့်​ကြည့်​​တော့ ” ပြုံးစိစိနဲ့ အဖွားကလုပ်​​နေတယ်​ ၊၊ငါ့သား​လေးက ငါ့ကို လွမ်း​နေတဲ့ အ​ကြောင်း​တွေ ​ပြော​နေတာ ဖြစ်​မယ်​ဆိုပြီးအဖွားက ပြုံးပြုံး​လေးနဲ့ ​ပြောပြ​နေတယ်။
အ​မေအို ကြားချင်​​နေတဲ့ စကား​တွေ ကျွန်​​တော်​ လိမ်​ညာပီး ဖြည့်​​ပြော​ပေးရမှာလား။
​သြော်​….အ​မေ့ရဲ့( သားသမိး​တွေဆီက ဝမ်းသာတဲ့ စကားကြားရလိူ့ပါ ဒါ​ကြောင့်​ငိုတာပါ အ​မေလို့ပြန်​​ပြောရင်း.ကျွန်​​တော်​ အ​မေအိုကို အိမ်​​ခေါ်သွားတယ်။
ကျေးဇူးမသိတဲ့ သား​တွေ ၊ သမီး​တွေအတွက်​ရင်​​လေးမိပါတယ်​ ၊၊မုန်းလည်း မုန်းတီးမိပါတယ်။